I-Netflix 5 yeShow-Watch Shows: Ukusuka eBridgerton ukuya kwiWitcher - Itv
Eyona Itv Amabango eNetflix 'iBridgerton' iya kuba yenye yeeMiboniso zayo ezi-5 eziBukele kakhulu
Amabango eNetflix 'iBridgerton' iya kuba yenye yeeMiboniso zayo ezi-5 eziBukele kakhulu
Zeziphi iinkqubo ezithandwayo kakhulu zeNetflix?LIAM UDANIEL / NETFLIX
Idrama yothando enesepha kaShonda Rhimes IBridgerton, eyaqala ngeKrisimesi, yi- ihlazo kunye nemibala ukuthanda ukuzinkcinkca ngokutsha. Kodwa ngaba ikwisantya ukuba yenye yeenqaku ezithandwayo zangaphambili zeNetflix? NgokukaNetflix, ewe.
NgoLwesibini, inkampani ibhengeze oko IBridgerton kuqikelelwa ukuba yongeze izigidi ezingama-63 zemibono yamakhaya ngenqaku leeveki ezine, iyenza ukuba ibe yeyesihlanu kuthotho olubukelwe kakhulu kwi-Netflix kwimbali yenkampani. Ngelixa oko kuvakala kuyinto entle ephepheni, inani elimenyezelayo kufuneka likunike ikhefu. INetflix ibala nayiphi na iakhawunti ebukela imizuzu emibini njengembono, utshintsho olusuka kwimilinganiselo yabo yangaphambili yayo nayiphi na iakhawunti ebukele isiqephu seTV okanye ifilimu kangange-70% yexesha lokubaleka. Ngamanye amagama, ukuba uzenzele izimuncumuncu ekhitshini ngelixa iNetflix idlala imizuzu emibini yokuqala kwimenyu yokukhetha, ubala njengombono. Ndiyakuhalalisela ngokuba yinkcukacha-manani yokuzazisa yenkampani eyi-200 yezigidigidi!
Le metric intsha yayi wagxeka xa yaziswa ngoJanuwari ukunyusa idatha yokulinganiswa kweNetflix. Ukuqhubekeka nokudaka amanzi kukuba iNetflix iyaqhubeka nokongeza izigidi zababhalisi abatsha. Umlinganiso ongcono wempumelelo yimizuzu iyonke ebukelweyo kaNielsen okanye yeyiphi ipesenti yababhalisi abaye bajonga isiqwenga somxholo, esingabonelelwa yiNetflix. Ke siyaku lumkisa ukuba uthathe ezabo iingxelo ezibonisa ezona zijongwe kakhulu ezintlanu ingqolowa yetyuwa . (Esi sizathu sokudibanisa uluhlu lwethu lwe I-Netflix eyaziwa kakhulu ngo-2020 ).
IBridgerton ndifike nje kwiNetflix ngoDisemba 25, ke kuyakuba lixesha ngaphambi kokuba sazi amanani asemthethweni eeveki ezine. Kodwa ukusukela ngoku, iNetflix inyanzelekile kwithemba lomdlalo weqonga wothando. Ukusasaza inkcitho yasimahla kuye kwatyikitya isivumelwano se-mega nabadali abanetalente njengoShonda Rhimes (i-100 yezigidi), uRyan Murphy (i-300 yezigidi) kunye neKenya Barris (i-100 yezigidi). IBridgerton ngokulula lolona phawu lubalaseleyo noluphumelele kakhulu kwezorhwebo ukuvela kulonto yokuchitha ( ekusafuneka ahlawule ngokwenyani ).
uninzi lwezinto ezifunwayo kwihlabathi ukuzolula okuhle kusebenze kwangoko kulo nyaka, ngokweParrot Analytics. Umnqweno wehlabathi woluhlu lubonakala uxhasa umbono wokuba, mhlawumbi, mhlawumbi ngu enye yezona zinto zidume kakhulu kwiNetflix.
inokuba ibingazange ibe yindebe yethu yeti , yabetha ngokucacileyo kubaphulaphuli ngokubanzi. Ixesha lesibini okwangoku likwimveliso njengoluhlu lwe-spinoff. I-streamer ngekhe itshone nezixhobo ezibalulekileyo kwipropathi ukuba ibingatsali amehlo.
Udongwe u-Aiken uqaqa ngokwakhe ukukhusela uDonald Trump
'Umthetho kunye noMyalelo: i-SVU' i-18 x 17: Ukuchonga inyani kwiFiction
Umkhankaso ka-Hillary Clinton we-Under-the-Radar Campaign
Ukumangaliswa kutyhila 'iFantastic 4,' ukuKhangela okuQala 'kwiiNaphakade' nangakumbi kwiSigaba se-4 seTrailer
loluphi usuku lokuqala kwaye lusebenza njani
Umdlalo wexilongo likaDonald weetrone
i-delta 8 thc ikhuselekile